Global Voices teny Malagasy » Jordania: Reema, Tsy avelanay ho zava-poana ny fahafatesanao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Aogositra 2010 7:06 GMT 1	 · Mpanoratra Katharine Ganly Nandika zhhantar
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Jordania, Fanabeazana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Politika, Vehivavy sy Miralenta
Loza iray no nahatohina anay.
Tsy noheveriko ho tonga amin'izao mihitsy izy ity. Ka hoe hanoratra ny tantaran'ny maty mikasika nenitoa faran'izay akaiky sy mamin'ny fo ao anatin'ny rehetra aho. Ny nenitoako Reema, homen’ Andriamanitra fiadanana anie ny fanahiny, 35 taona, manan-janaka vavy 2 sy lahy 1 , no maty novonoina tamin'ny habibiana nandritra ny torimasony. Ny vadiny ihany no namono azy.
Nanokatra ny teniny miaraka amin'ny  tantaran'ny maty mampangotsoka sy mampihetsi-po nosoratany ho an'ny nenitoany ny mpitoraka blaogy Aboosh .
Andro vitsy lasa izay, tany amin'ny fari-piadidian'i Jerash , any Jordania, novonoin'ny vadiny nandritra ny torimasony i Reema  [Ar]. Ny antony namonoana azy ? Nihevitra ny vadiny fa “tratry ny mosavy ” ny vady andefimandriny ka mety ho izy no hovonoiny voalohany; nilaza  izy fa lehilahy “azo antoka tsara” no nilaza taminy fa nidiran'ny tromba-na mpamono olona ny vady andefimandriny.
Hatreo dia tsikaritra fa ity niharam-boina ity, mpampianatra teny Anglisy izay 35 taona sady reny manan-janaka telo, dia niaritra ny fampijaliana ara-tsaina sy ara-nofo nataon'ny vadiny nandritry ny taona maro.
Nasian'i Aboosh fanazavana ny karazana anjara asan'ny maha-modely an'i Reema, indrindra ho an'ireo zatovovavy any Jordania:
Famaritana ny atao hoe hatanorana ny nenitoako (tsy ekeko ny hiteny azy amin'ny filazam-potoanan'ny lasa ), manam-pahaizana izy ary ohatra eo an-toerana amin'nyvehivavy mpitarika izy. Teo amin'ny fiainany izay tapaka tampoka, nahazo fanohanana lehibe isan-karazany sy fitiavana avy amin'ny tsirairay izay nifanena taminy na izay nifanojo tamin'ny lalany izy. Ohatra ho an'ny tsirairay ihany koa izy, miaraka amin'ny haavon'ny fianarany, ny faharetany, ary ny filatrony .
Ao anatin'i Jordanian'ny taonjato faha-21, mitovy amin'ireny olon-tsotra niezaka ny hahazo zavatra ireny izy. Ny asany ho an'ireo anjerimanontolo eo an-toerana, ho an'ireo sekoly eo an-toerana sy ireo fianarana ambony dia nahakasika ireo tanora vehivavy an-jatony teo an-toerana .
Ao anatin'i Jordanian'ny taonjato faha-21, izy no maneho ny ohatra amin'ny fitarihana eo an-toerana izay miasa tsy miandry tamby, hanovàny ireo manodidina azy, mba hitondra ho avy tsaratsara kokoa ho an'ireo izay nanaraka ny dindony, ary hitondra ny revolisiona amin'ny ambony indrindra arak’ izay tadiavintsika rehetra.
Ao anatin'i Jordanian'ny taonjato faha-21, lasitra ho an'ireo vehivavy Silamo maneran-tany i Nenitoa Reema: modely amin'ny fitahirizana ny rakitry ny ela sy ny modernisma, izay idiran'ireo soatoavina ara-koltoraly eo an-toerana, nahomby teo amin'izay tsy naha-tafavoaka ny maro hafa .
Ao anatin'i Jordanian'ny taonjato faha-21, maty notifirina nandritra ny torimasony ny nenitoako Reema AbdulHafez Al-Abed, .
Tsy avelan'i Aboosh ho zava-poana ny fahafatesan'i Reema , ary mangataka an'i Jordania izy hanao hetsika ka mba ho zavatra tsara no ho azo amin'ity loza mitranga ity. Manao antso avo amin'ny governemanta izy hanome fanohanana sy fiarovana ireo vehivavy izay ampijaliana sy tra-boina. Miantso ny governemanta ihany koa izy hifantoka amin'ny fianarana mikasika ny “mpanao hatsaràna / mpamantatra ny hoavy”, mampiseho ireo laingany ka hitazona azy ireo ho tompon'antoka amin'ireo heloka naterany .
Miantso ny fiaraha-monina ihany koa hijery ireny olana ireny i Aboosh, mampahafantatra fa ny fiaraha-monina dia “mitàna anjara asa mavesatra indrindra” ho amin'ny fanovàna. Manao antso maika toy ity manaraka ity izy :
1. Mila mampianatra ireo fiaraha-monina eo an-toerana mikasika ny anjara asa sy andraikitr'ireo lehilahy manoloana ny vadiny, ary ny fomba hikarakarana azy ireo am-panajana sy am-pahamendrehana ireo mpitarika moske rehetra sy ireo zokiolona mpanolotsainan'ny foko rehetra.
2. Mila mampianatra ireo vehivavy mikasika ny zony sy ireo safidiny hialana amin'ny fampijaliana ara-tsaina sy ara-nofo ireo ivontoera eo an-toerana natao ho an'ny vehivavy .
3. Tsy tokony hatao hisolo vaika ny akalana isaky ny mihetsika ny vehivavy mba hiarovana ny anarany sy ireo zanany. Efa hitantsika ny vidin'izany!
4. Tokony ho faranana hatreo ny fifanambadiana eo amin'ny zanaky ny mpiray tampo, na dingana voalohany io na taranaka faharoa. Ny ankamaroan'ireo fanambadiana eo amin'ny samy mpihavana no mifarana amin'ny fipongaran'ireo ady nandatsa-dra taloha nisy teo amin'ny fianakaviana.
5. Ireo mpandainga rehetra milaza azy ho mpanao hatsaràna / mpmantatra ny ho avy, na manao “voodoo” ireo dia tokony halefa any am-ponja ho faty any, satria any no toeran'ireny.
Nanao hetsika manohana ny lahatsoratr'i Aboosh ny vondrom-piaraha-monin'ny fitorahana bilaogy, ary nanaparitaka ny hafany .
Manoritra  ireo olan'ny fanamelohana any Jordania i Jansait, toerana izay ahitana vehivavy manana làlana kely hidirana mankamin'ny fiarovana ara-pianakaviana , ary azo ampiasaina ho antony iray migeja azy ny fitandroana ny ‘hajany ‘  amin'ireo trangana vono olona .
Manontany i Jansait:
Vehivavy firy no tokony ho faty vao ho taitra isika ? izay vao hanao zavatra ireo governemantantsika na sy ny Mpanjakalahy Abdullah sy ny Mpanjakavavy Rania ? Tsy kilalao mihitsy ireny fanahy ireny ! Ireo vehivavy ireo no fàka, loharano ary fitaratry ny Jordania hoavy. Ho avy manao ahoana no andrandraintsika amin'izao fotoana izao ?
Maneho ny olana ao amin'ny Twitter i Jansait miantso ireo hetsika avy amin'ny Fianakavian'ny Mpanjaka :
“ny tweet faha- 15 000 dia atolotsika ho azy, ho azy sy ireo vehivavy rehetra matymaty foana teto Jordania nefa tsy nisy na inona na inona nataon'ny governemanta”.
Raha toa ny hafa toy i Majd manohana an'i Aboosh amin'ny antsony ho fanamelohana ny hetsik'ireo antsoina hoe ” mpanao hatsarana / Mpamantatra ny ho avy” :
@Aboosh Eny,marina ny anao. Dingana 1: ilaina ny mahalala ireny zava-doza ireny mba hifanomezan-tànana amin'ny governemanta mba hanaraha-maso ireo milaza azy ho سحرة [Tenin'ny mpanoratra: سحرة dia teny Arabo ho an'ireo mpamosavy na mpanao mazia na mpamantatra ny ho avy . ]
Manao antso maika ho an'ny vahoaka i Jansait mba hanao hetsika :
“Miangavy, aza hoe mamaky fotsiny dia lasa ianao.. ndeha isika hirotsaka hitondra fanovàna ka hanao zavatra..be ny vehivavy maty vonoina aty Jordania, noho ny antony tsy misy dikany akory !”
Ary nanao hetsika ny olona ao amin'ny Womens Rights on change.org  ka nanomboka nanangon-tsonia  mba hanandratana ny fahatsapan-tena sy hanerena ny governemanta mba hanao fanovana. Toy izao ny vakiny:
Ny Fianakavian'ny Mpanjaka sy ny Governemanta ,
Amin'ny maha-endriky ny fanapahana anareo, mangataka anareo aho ny hilaza sy hanova ireo lalàna ho asa mikasika ireo heloka bevava mahery setra atao amin'ireo vehivavy any Jordania. Ka mba i Reema Al-Abed, vehivavy 35 taona, reny manan-janaka telo izay notifirin'ny vadiny nandritry ny torimasony nefa tsy meloka, no ho tra-doza farany.
Fanampin'ny fanovana eo amin'ny lalàna, ilay fanangonan-tsonia dia miantso ny rafi-pitantanana mikasika ny fahafaha-miditra amin'ireo toby fialokalofana sy ireo ivontoerana ho famahana olana ho an'ireo vehivavy iharan'ny herisetra na an-drenivohitra na any amin'ny faritra ambanivohitra. Azo atao sonia eto .
Namela hafatra anjatony maro ireo mpamaky mikasika ny vaovao voatatitra  momba ny fahafatesan'i Reema izay maneho ny alahelony, ary maneho ny fiaraha-miory, toy izao :
لا حول ولا قوة الى بالله ان لله وان الية لراجعون
Tsy misy fiovana na tanjaka raha tsy avy amin'ny Tompo. An'Andriamanitra isika ary Any Aminy isika no mody .
Fa i Aboosh kosa ao amin'ny bilaoginy, dia mitana ny zotom-pony amin'ny fanaovana antso avo amin'ny fiaraha-monina haka lesona avy amin'ny famonoana an'i Reema :
TSY MANAIKY ny hamela ny fahafatesanao ho zava-poana izahay .
Hanana risi-po hiatrika ny fahaverezanao tsy fidiny sy hampitraka ny loha izahay, ary haneho amin'izao tontolo izao izay nampianarinao anay ary tohizanao hampianarina anay .
Hanazava ny lalana amin'ny fahafatesanao izahay toy ny nataonao fony ianao mbola velona .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/08/31/8402/
 Nanokatra ny teniny miaraka amin'ny : http://aboosh.wordpress.com/about/
 tantaran'ny maty : http://aboosh.wordpress.com/2010/08/16/you-will-not-die-in-vain/
 novonoin'ny vadiny nandritra ny torimasony i Reema : http://www.assawsana.com/portal/newsshow.aspx?id=34892
 nilaza : http://www.jordantimes.com/index.php?news=29232&searchFor=jerash
 Manoritra : http://jansait.wordpress.com/2010/08/17/jordan-needs-help/
 làlana kely hidirana mankamin'ny fiarovana ara-pianakaviana : http://lasharaffiljareemah.ning.com/forum/topics/an-aborted-honor-crime-the
 antony iray migeja azy ny fitandroana ny ‘hajany ‘: http://lasharaffiljareemah.ning.com/
 Womens Rights on change.org: http://womensrights.change.org/
 nanangon-tsonia : http://womensrights.change.org/petitions/view/break_the_silence_on_the_violent_crimes_against_women_in_jordan
 vaovao voatatitra : http://www.sarayanews.com/home.php?mode=more&newsid=33550&catID=39